Ide ederede na ịnya ụgbọ ala: Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị ntorobịa America na-adọpụ uche n'azụ Wheel - Ụwa 2022
Ide ederede na ịnya ụgbọ ala: Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị ntorobịa America na-adọpụ uche n'azụ Wheel
Ide ederede, bụ nke e jikọtara n'oge na-adịbeghị anya na enweghị mmasị na àgwà ịkpa ókè agbụrụ, bụkwa ihe a na-emekarị maka ihe karịrị mmadụ anọ n'ime ndị nọ n'afọ iri na ụma n'azụ ụkwụ, dị ka nchọpụta ọhụrụ si kwuo.
Na nyocha 2011 banyere omume ntorobịa nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa nke United States mere, pasent 43 nke ụmụ akwụkwọ sekọndrị ndị America kwetara na ha na-ezi ozi mgbe ha na-anya ụgbọ ala, Ide ederede mgbe ị na-anya ụgbọ ala na-abawanye ohere nke ịdaba na ugboro 23, dịka nyocha dị ugbu a. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ekwu na ide ederede mgbe ị na-anya ụgbọ ala dị ize ndụ karịa ịnya ụgbọ ala mgbe mmanya na-egbu ya, ka Healthday News na-akọ.
Nnyocha ahụ jụrụ ndị nọ n'afọ iri na ụma ma ha ezigara ozi ozi mgbe ha na-anya ụgbọ ala n'ime ụbọchị 30 gara aga, pasent 43 kwuru na ha nwere.
O yikarịrị ka ndị nwoke na-anabata ozi mgbe ha na-anya ụgbọ ala karịa ụmụ nwanyị, ebe pasent 46 nke ụmụ nwoke na pasent 40 nke ụmụ nwanyị na-akọ.
Ohere nke ide ozi mgbe ị na-anya ụgbọ ala mụbara na afọ: pasent 26 nke ndị dị afọ iri na ise, pasent 33 nke ndị dị afọ 16, pasent 46 nke ndị dị afọ 17, na pasent 52 nke ndị dị afọ 18 na-eme ya.
Ndị nọ n'afọ iri na ụma bụ ndị kọrọ na ha na-edere ozi mgbe ha na-anya ụgbọ ala nwekwara ike itinye aka na azụmahịa ndị ọzọ dị ize ndụ, gụnyere ịnya ụgbọ ala mmanya, inwe mmekọahụ na-enweghị nchebe, na iji ngwaọrụ akpụkpọ anụ ụlọ.
"Site n'ịchọpụta àgwà ndị nwere nnukwu ihe ize ndụ dị ka ndị a, ọ bụ olileanya anyị na anyị nwere ike ịmepụta usoro dị irè karị iji belata ederede mgbe ị na-anya ụgbọ ala," onye nchọpụta bụ isi Alexandra Bailin, onye enyemaka nyocha na Cohen Children's Medical Center nke New York, kwuru na onye America. Mwepụta akụkọ ụlọ akwụkwọ Academy of Pediatrics.
Ọ dị mma ịmara na pasent 49 nke ndị toro eto na-ekweta na ha na-ezipụ ozi mgbe ha na-anya ụgbọ ala, dị ka nchọpụta dị iche nke AT&T mere.
Nnyocha e mere n'afọ iri na ụma chọpụtakwara na iwu steeti machibido ide ederede mgbe ị na-anya ụgbọ ala enwechaghị mmetụta na omume a kọrọ.
Na steeti ebe iwu na-akwadoghị ịnya ụgbọ ala na ide ozi n'ekwe ntị, pasent 39 nke ndị nọ n'afọ iri na ụma kọrọ omume ahụ, ma e jiri ya tụnyere pasent 44 nke ndị nọ n'afọ iri na ụma na steeti ndị iwu kwadoro.
"Ọ bụ ezie na ndị nọ n'afọ iri na ụma nwere ike ịmalite ịmalite itinye aka n'omume ime ihe ize ndụ, na-ebelata mgbasa ozi ederede mgbe ị na-anya ụgbọ ala bụ ụzọ doro anya ma dị mkpa iji hụ na ahụike na nchekwa nke ndị ọkwọ ụgbọala na-eto eto, ndị njem ha na ndị gbara ya gburugburu," Bailin kwuru.
Emebebeghị nyocha-ọkwa a.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ịnya ụgbọ ala dọpụrụ uche, gaa na webụsaịtị US National Highway Safety Safety Administration.